မောင်ဖုန်းမြင့်: 6/1/08 - 7/1/08
ထိမ်းထိမ်း သိမ်းသိမ်း လုပ်စေချင် ပါသည် ။
ဒီအကြောင်း ကို ပြောချင်နေတာ ကြာပြီ ၊ ပြောသင့် မပြော သင်.ချင်.ချိန် နေတာလည်း ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည် ။
အခုတော့ မပြော ပဲနှင်.ကိုမနေနိုင်တော့ ။ ပြည်တွင်းမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေကြသူတွေအခက်၊အခဲပေါင်းစုံနှင့် ရင်ဆိုင် နေရသည်။ ကိုဇာဂနာမှ အစ ပြု ကာ၊ အလောင်း တွေ မြုပ်နှံ င်္သဂြိုဟ် ကြ တဲ. အဖွဲ့ တွေ အဆုံး ဖမ်းဆီး ထိမ်းသိမ်းခံ လိုက်ရသည်။အခု လိုကယ်ဆယ်ရေး လုပ်နေ သူတွေ ဖမ်းဆီး ခံကြရတော့ ဘယ်သူတွေ ဒုက္ခရောက် သနည်း ။ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေပဲဖြစ်သည် .......။
ညက ကိုမျက်လုံး နှင့် ဂျီတော. မှာ အတော်ကြာ စကားပြောဖြစ်သည် ။ ကိုမျက်လုံး တို့ က မုန်တိုင်းဒါဏ် ခံ ဒေသ ဖြစ်တဲ့ လပွတ္တာ ဘက် မှာ ဘက်ဂျက် တဲဆောက် ပြီး အကူ အညီပေးနေ သူတွေ ။ သူနဲ့ စကားပြော ပြီး မှာ သူတို့ ရင်ဆိုင် နေရတဲ့ အခက် အခဲတွေ အများကြီးကို နားလည် လိုက်ရသည် ။ သူတို့ရဲ မိသားစု အရေး ကိစ္စ တွေကို စွန့် ပယ်ထားပြီး မုန်တိုင်း သင့် ပြည်သူတွေ ကို အတတ်နိုင် ဆုံး အကူအညီ ပေးနေကြ သူတွေ ၊ သူတို့ ရဲ့ ကို.ယ်ပိုင် လူမူရေး ကိစ္စ တွေကို ခေါင်းထဲ မထည်.ထားကြသူတွေ ဖြစ်သည် ။ ဒီလို လူတွေကို ဘာလို့ အနှောင့် အယှက် ပေးချင် နေရပါ သနည်း ။ ကိုမျက်လုံး ကတော့ “ဘလော့ ပေါ်လဲ အစအဆုံး လိုက် တင် မနေချင်ဘူး ။ အဲ့ဒီတော့ လုပ်လဲလုပ်ရသေး။ ဒုက္ခဝိုင်းပေး တဲ့ သူတွေက ပြောချင် သလိုပြောနဲ့ ဆိုတော့ စိတ်တော်တော် ဆင်း ရဲရ တယ် ” ဟု သာ ငြီးတွားသွားခဲ.သည် ။
မီဒီယာ ဆရာသမားတို့ ထိမ်းထိမ်း သိမ်းသိမ်း လုပ်စေချင် ပါသည် ....။ ညီမငယ် ကဲ့သို့ ခင်မင်ရသူ ဘလောဂ်ဂါ တစ်ဦး မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသတွင် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်စဉ်ကလဲ ယခုလို အဖြစ်ပျက် မျိုးကြား ခဲ့ရဘူးသည် ..။
အကျယ်ချဲ့ပြီး အရှည် မပြောချင်တော့ “ကိုမျက်လုံး” မနေနိုင် လွန်းလို့ ရေးလိုက် တဲ့ပို့စ် ကိုသာ ကူးယူ ဖော်ပြလုိုက် ပါသည် ။ ဖတ်ရှု ကြပါကုန်........... ။
ညနေက ကျွန်တော့်ရဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်မှ ပြောလာပါတယ်။ မင်းတို့ လေဘေးသင့်တဲ့သူတွေကို အိမ်တွေပြန်ဆောက်ပေးနေတဲ့အကြောင်းကို RFA က ပြောသွားတယ်တဲ့။ မင်းတို့ကို ဦးဆောင်လုပ်နေတဲ့ ကိုညီလင်းဆက်ဆိုတဲ့ ကွန်ပျူတာသမားက မန်နေဂျာရာထူးကတောင်ထွက်ပြီး လုပ်နေတယ်။ ရံပုံငွေ ဒေါ်လာသောင်းချီပြီးရနေတော့ အတားအဆီး၊ အနှောက်အယှက်မခံရပဲနဲ့ ဆက်လုပ်လို့ရနေတယ်ဆိုပြီး ပြောသွားတယ်တဲ့။ အဲဒီအကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့ အားလုံးသိသွားတာနဲ့ တော်တော် ဒေါသထွက်သွားပါတယ်။ ဒီမီဒီယာတွေနဲ့ ပတ်သတ်လို့ အရင်တုန်းကလည်း ကျွန်တော် တော်တော်ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဘေးကနေတီးပေးမနေကြပါနဲ့လို့။ ခင်ဗျားတို့ မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးတဲ့နေရာက မဆင်မခြင် ဒါမှမဟုတ် ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိပြောလိုက်တဲ့ စကားတွေက စိတ်သန့်သန့်နဲ့ လုပ်နေကြတဲ့သူတွေအတွက် ဘယ်လောက်အထိ ထိခိုက်ခံစားသွားရနိုင်သလဲဆိုတာ သတင်းသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ သိသင့်ပါတယ်။ ဒါမျိုးက သတင်းသမားမှမဟုတ်ပါဘူး။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အခြေခံ အသိစိတ်ဓါတ်လောက်ရှိရင်တောင် ပြောသင့် မပြောသင့် သိပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ အဲဒီလို ပြောလိုက်တာ သတင်းဟုတ်ပါသလား။ ဘယ်သူတွေများ အကျိုးထူးရသွားမလဲ။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ လူအချင်းချင်း တတ်နိုင်သလောက် ၀ိုင်းကူနေကြတာပါ။ ခင်ဗျားတို့လို အဝေးကြီးကနေ ခံစားခွင့်တွေ တစ်ပုံကြီးနဲ့ လေကိုရင်းပြီး လုပ်စားနေကြတဲ့သူတွေ တစ်ယောက်မှ မပါပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ စိတ်ထဲမှာ ရှိနေတာက ကျွန်တော်တို့လက်ထဲ ရောက်လာသမျှသော ရံပုံငွေမှန်သမျှကို လေဘေးရော၊ ရေဘေးပါ တကယ်ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေဆီကို အကျိုးရှိရှိရောက်သွားဖို့ပါ။
ခင်ဗျားတို့ ထင်ထားတာက ဒေါ်လာ သောင်းဂဏန်းလောက်က ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကို ဒုန်းဆိုရောက်လာ၊ ကျုပ်တို့က အဲဒီပိုက်ဆံတွေကို ၀ယ်စရာရှိတာ အလွယ်တကူဝယ်ပြီး ကားကြီးနဲ့ ငြိမ့်ငြိမ့်လေး လပွတ္တာကိုရောက်၊ ဟိုဟိုဒီဒီ လှူစရာရှိတာတွေ လှူပြီး ပြန်လာကြ ဒီလိုများ ထင်နေကြသလား။ အဆင့်တိုင်း အဆင့်တိုင်းမှာ ဆက်လုပ်ချင်စိတ်ကုန်လောက်တဲ့အထိ အခက်အခဲတွေ အများကြီးပါ။ ကျွန်တော်တို့မှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော ထိခိုက်မှုတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါတွေကို ဘယ်သူမှ ကျွန်တော်တို့လောက် မသိပါဘူး။ ဒီကောင်တွေ ဘာကြောင့်အတားအဆီး မခံရတာလဲဆိုတာလောက်ပဲ ခင်ဗျားတို့ စဉ်းစားတတ်သလား။ ငါတို့ ပြောလိုက်လို့ ဒီကောင်တွေ ဒုက္ခရောက်သွားရင် ငါတို့ ဖွစရာ သတင်းရမယ်ဆိုတာလောက်ပဲ တွေးသလား။ နည်းနည်းငြိမ်သွားရင် မပွ ပွအောင် ထပြီး ဖွ၊ ခံစရာရှိတော့ တကယ်လုပ်နေရတဲ့ကောင်တွေခံ၊ အဲဒီအချိန်ကျမှ ခင်ဗျားတို့ လျှာတွေယားနေအောင် ပြောချင်နေတဲ့ အကြောင်းတွေကို အတုံးလိုက် အတစ်လိုက် ၀ိုင်းပြောကြ။ အဲဒီအချိန်မှာ လေဘေးရေဘေးခံခဲ့ရသူတွေအတွက်လည်း ထိခိုက်နစ်နာမှုအများကြီး ရှိသွားမှာပဲဆိုတာ တွေးမိသလား။ လက်ရှိပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ လှူဒါန်းကူညီနေတဲ့သူတွေက စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး အားလုံးကို အထိခိုက်ခံပြီး လုပ်နေရတဲ့အထဲ ဘယ်သူတော့ ဘယ်လို ဖြစ်သွားပြီဆိုပြီး ကြားရရင် ဒီအလုပ်ကို လုပ်နေတဲ့ လူ ၁၀၀ မှာ ၉၀ လောက်က ဆက်မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင် ဘယ်သူတွေ အကျိုးယုတ်မလဲ။
ဘယ်သူမှ မတားလဲ ကျွန်တော်တို့မှာ Fund မရှိသလောက် နည်းနေပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီအလုပ်တွေ ဆက်လုပ်ဖြစ်မယ် မထင်တော့ပါဘူး။ အခုလောလောဆယ် ကိုညီလင်းဆက်တို့ ဆိပ်ကလေးကုန်းရွာမှာ အိမ်အလုံး ၂၀ နဲ့ ကွင်းသုံးဆင့် ရွာမှာ အိမ် အလုံး ၂၀ ဆောက်ပေးနေကြပါတယ်။ ဒီရွာတွေမှာတော့ အိမ်တိုင်တွေက အစ ပံ့ပိုးပေးတဲ့အတွက် ကုန်ကျစရိတ်တွေလည်း ပိုပြီးကုန်ကျလာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာ Fund လည်း မရှိ၊ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် အခြေအနေလည်း မပေးတော့ဘူးဆိုရင်တော့ ဘယ်လောက်ပဲ လုပ်ချင်စိတ်ရှိရှိ ဆက်လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး ။
Posted by phone myint at 8:50 AM No comments: Links to this post
ကျွန်တော် ရဲ့မေးလ်ထဲကို ရောက်လာတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် အောင်မျိုးဝင်း ရေးသားပြီး ဒုတိယအိမ် နိုင်ငံတကာ စာပေဆက်ဆံရေး က ဖြန်.ချီ ထုတ်ဝေ လိုက်တဲ့ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက် နေတဲ. နိုင်ငံတော်မှာ ဆိုတဲ့ ရသ စာပေ ဆောင်းပါး ထဲက ကြိုက်နှစ် သက်မိတာလေးတွေကို ပြန်လည် ဝေမျှ လိုက်ပါတယ် .....။
"ကိုယ့်ခေါင်းဆောင် ၊ ကိုယ်ယုံကြည်ချက် ၊ ကိုယ့်ရဲဘော် အပေါ်မှာ ဘယ်တော့မှ သစ္စာမဖောက် ပါနဲ့"
( ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် )
တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ. နိုင်ငံတော်မှာ (In the Quiet Land )
ဘယ်သူမှ မရယ်မောနိုင်ကြသလို ၊ ကျယ်ကျယ် လောင်လောင် လဲ မတွေးနိုင်ကြဘူး ၊
တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ နိုင်ငံမှာ ....
အဲဒီအရာတွေကို လူတွေရဲ့ ငြိမ်သက်နေတဲ့ အရာတွေထဲ မှာ ကြားနိုင်မယ် ။
စစ်သားတွေက ဘယ်အချိန်မှာ ရောက်လာပြီး ဖမ်းခေါ်သွားမယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူး။
တရုတ်တွေက လမ်းမကို လိုချင်တယ၊် ပြင်သစ်တွေက ရေနံလိုချင်တယ် ၊
ထိုင်းတွေက သစ်တွေကိုယူတယ် ၊ စစ်အစိုးရ က အပျက် အစီးတွေကို ယူတယ် ။
နောက်.....ကြောက်လန့်မှုတွေနဲ့ ဖုံးအုပ်ပစ်လိုက်တဲ့ အရာတွေ
လွတ်မြောက်မှု ရဲ့ တေးသံတွေကိုတော့
လူလိမ်တွေက အတုအယောင်တွေ အဖြစ်ဖန်တီးလို့ မရသလို
ဟိန်းဟောက် အော်ဟစ်မူတွေနဲ့လည်း ဆွဲနှစ်ပစ်လို့ မရနိုင်ပါဘူး........။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အင်္ဂလိပ်လို ရေးခဲ့တဲ့ " တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက် နေတဲ့ နိုင်ငံမှာ" ဆိုတဲ့ ကဗျာလေး ထဲက တစ်ပိုင်းတစ်စ စာသားတွေပါ ။ ခံစားရတယ် ၊ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် အမှောင်ထဲမှာမြုပ်သွားလိုက် ..........
နောက် .. အလင်းစက်တွေကြားမှာ ဝုန်းကနဲ ကွဲထွက်လွင့်စင်နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အပိုင်းအစတွေကို ပြန်ဆက် ဖို့ ကြိုးစားလိုက်နဲ့ ............
ကားသံတွေ ကြားနေရပြီဆို လူ က ဆတ်ကနဲထထိုင် မိတယ် ။စဉ်းစား မနေတော့ပဲ အိမ်အနောက်ဘက် ဝရန်တာ လက်တန်းတွေကနေ ခုန်ချထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ လူတွေရှိနေဆဲပဲ ဆိုတာသိနေတယ် ။ တချို့က ဆောင်းညတွေဆို စစ်ကြောရေး စခန်းထဲက တရစပ် ရိုက်တဲ့ ရာဘာစွပ်ထားတဲ့ သံပိုက်လုံးတွေ ကြောင့် ခြေထောက်အကြောတွေထုံးပြီး လမ်းမလျှောက်နိုင်ကြတော.သလို၊ခု လိုရက်တွေ... အိမ်လေးဆီကို နေရာ အနှံထိုးခွဲမွှေနောက်နေတဲ့ စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေ .....မျက်နာကို အဝတ်စည်းပြီး၊ပြီးမှ နောက်ကနေ ကျောပြင်နဲ့ ခေါင်းကို ကန်နေကြမယ် ။
ညည်.နက်တွေမှာ မိသားစုတွေ အထိတ်တလန့် ၊နုတ်ဆက်ချိန် မရလောက်အောင် ဖရိုဖရဲ ကွဲကြေခဲ့ကြ ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ. လူထုခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်လည်း မိုးရေ စီးကြောင်းနှင့် အက်ကွဲနေတဲ့ မှန်ပြုတင်းလေး ဘေးမှာ...........။
ဦးဝင်းတင် ၊ မင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး ၊ ဌေးကြွယ် ၊ ဂျင်မီ ၊ မီးမီး .........မကျေမချမ်းရေရွတ်နေတဲ့ ဒါဏ်ရာတွေ...
နွေးထွေး ချစ်စရာ ကောင်းနေကျ
ငါမွေးဖွားခဲ့ ရာ အိမ်ကလေး
ခုတော့ မှောင်မဲ စိတ်ချောက်ခြားဘွယ် အရာတွေ နဲ့ ပြည်.နှက်ပေါ့.....
ငါ့ကို လူလားမြောက်အောင် လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ မိသားစုလည်း
ခုတော့ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုတွေနဲ့ နေနေခဲ့ရ ..........
သန့်စင်ပျော်ပါးခဲ့ ကြတဲ့ ဘဝတွေကို
ငါနဲ.အတူ မျှဝေခံစားဘူးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း
ခုတော့ ဒါဏ်ရာတွေ ပြည်.ဝနေတဲ့ နှလုံးသားတွေနဲ့.......
( လွတ်မြောက်တဲ့ ဗမာပြည်ကို ပျံသန်းနေမဲ့ လွတ်မြောက်နေတဲ့ ငှက်ကဗျာမှ )
မိုးပြိုမှာ မကြောက်ပေမဲ့ အကျဉ်းထောင်ထဲက မတရားဖမ်းခံထား ရတဲ့လူတွေ တစ်ရက်လောက်တော့ငြိမ်းငြိမ်း ချမ်းချမ်း နေကြရပါ စေသားလို့ ဆုတောင်းလိုက်ချင်ရဲ့ (စိတ်ထဲမှာ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာလည်း သိနေသေးတော့) ။
Posted by phone myint at 2:33 AM No comments: Links to this post
ဒီလိုမျိုး ဘလောဂ် လေး တစ်ခု ပေါ်ထွက် လာဖို.ကို မျှော် လင်.နေမိတာ ကြာပါ ပြီ ။ အစ က စိတ်ကူးရှိသော် လည်း ပဲ ကိုယ်ပိုင် အချိန်တွေ ဆင်းရဲလွန်းတာ ကြောင့် စိတ်ကူး နဲ.ပဲ အဆုံးသတ် ခဲ့ ရတာပါ ။ အခုတော. မြန်မာ ဘလောဂ်ဂါ တို့ ၏ ပို့စ် အသစ်များ
ဆိုတဲ့  ဘလော.ဂ် အသစ် တစ်ခု ပေါ်ထွက် လို့ လာ ပါပြီ ၊ စီစဉ် ဖန်တီးသူ ကို ကျော်လင်းထွန်း ကို အထူးပဲ ကျေးဇူး တင်ရှိ ပါတယ်
ဒီဘလော့ဂ် လေးဟာ မြန်မာ ဘလော့ဂ်ဂါ ရပ်ဝန်း အတွက် လိုအပ် ချက် လေး တစ်ခု ကို ဖြည်.ဆည်းပေးလိုက် သလိုပါပဲ ။ တစ်ချိန်ထဲ တပြိုင်ထဲ နဲ. မြန်မာ ဘလော့ဂ်ဂါ တွေရဲ.ပို့စ် အသစ်တွေကို ဖတ်ရူရမှာပါ ။မြန်မာ ဘလောဂ့် ဂါ တွေရဲ့ ဘလောဂ်ပို့စ် အသစ်တွေ ကို ဖတ်ရှုလိုတဲ့ စာဖတ်သူတွေ အတွက် အချိန်ကုန် သက်သာစေ ပြီး ရှာဖွေရ လွယ်ကူ အောင် စီစဉ်ပေး ထားပါတယ် ။
လင့်မချိတ်ရသေးတဲ့ မြန်မာ ဘလော့ဂ် ဂါ များ ဆက်သွယ်ပြီးတော. လင့်ချိတ်ဆက် နိုင်ကြပါ ပြီ ....။
Posted by phone myint at 6:21 PM No comments: Links to this post
အမျှဝေ ပေးကြ ပါ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရွှေပြည်ကြီးမှာ နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်ပြီးခဲ.တာ တစ်လကျော် ကြာခဲ.ပါပြီ ။ အခုအချိန်ထိ တာဝန်ရှိတဲ. အစိုးရဟာ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ပြီးဆုံးလို. ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများ စတင်နေပါပြီ လို့ ပြောနေတုန်းပါပဲ ။ သူတို.ရဲ. အပြောမှန်မမှန်ကို တော. အင်တာနက်စာ မျက်နာတွေက သက်သေခံနေကြပါ တယ် ။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ဖုိ့ .အသာထား ၊ မုန်တိုင်းအတွင်းက သေဆုံးသွားတဲ.လူတွေရဲ. အလောင်းတွေ ကိုတောင် ကောက်ယူ မြုပ်နှံ နိုင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ တကယ်ဆို ဒီလူတွေရဲ့ ရုပ်ကြွင်းတွေကို စနစ်တကျ မှတ်တမ်း မတင်ထားနိုင်ရင် တောင်မှ သေဆုံးသွားတဲ့ လူတွေရဲ့ ကိုးကွယ်မှု ဘာသာတရား ဓလေ.ထုံးစံတွေ အတိုင်း မြုပ်နှံ သဂြို င်္ဟ် ပေးသင့်ပါတယ် ။
သေဆုံးသွားတဲ့ လူတွေအတွက် ဂုဏ်သိက္ခာနှင်. လူသားဆန်မှု အရ နောက်ဆုံးအနေ နှင်. အလေးအမြတ်ပြုပေး စေချင်ပါတယ် ။ အခုလို မျိုး လမ်းဘေးမှာ ပိုးစက် ပက်စက် စွန်.ပစ်ထား သလို မျိုးကတော. ဘယ်လိုနည်းနဲ. မှ မသင်.တော်ပါဘူး ။
ယခုလို သေဆုံးကွယ်လွန်သွားကြ တဲ. လူတွေဟာ သဘာဝ ဘေးဒါဏ် အန္တရာယ် တစ်ခုကို မည်သူတစ်ဦးတစ်
ယောက်ရဲ. အကူအညီ မပါပဲ နောက်ဆုံးအချိန် အထိ သူတို.ရဲ.ရှင်သန်မူအတွက် ၊ တိုက်ပွဲ ဝင်သွားခဲတာ ကို ကျွန်တော်တို့တွေ အသိအမှတ်ပြုရပါလိမ်.မယ် ။
အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ ဓလေ.ထုံးတမ်းအစဉ်အလာ အတိုင်း ကွယ်လွန်သူ တွေ ကောင်းရာ ဘုံဘဝ ရောက်ရှိနိုင် ဖို. သရဏဂုံတင် ကုသိုလ်ပြု အမျှအတန်း ပေးဝေပေးသင့် ပါတယ် ။ အခုလို လူမြင် မကောင်း သူမြင် မကောင်း လောက်အောင် အလောင်းတွေ ပြန့်ကျဲ နေပြီး ကောက်ယူ သဂြို င်္ဟ် နိုင်ခြင်း မရှိရလောက်အောင် မုန်တိုင်းဒါဏ်ခံ ရတဲ.ဒေသ တွေဟာ စစ်မြေပြင် မဟုတ်ပါဘူး ။ တကယ့် စစ်မြေပြင် ဆိုရင်တောင် မှ ဒီလောက် အခြေ အနေ ဆိုးဝါး လွန်းလှမယ် မထင်မိပါဘူး ။
ယနေ့ မြန်မာပြည်ကြီးကို ချောက်ကမ်းပါးထဲ ကျလုဆဲဆဲ မှ ကယ်တင် ထားရပါတယ် လို့ မီဒီယာ တွေမှာ အတိအလင်း ထုတ်ဖော် ကြော်ငြာ ခဲ့တဲ စစ်အာဏာရှင်တွေ ဟာ ကွယ်လွန်သွားရှာ ပြီဖြစ် တဲ့ လူတွေအတွက် ကို အသာထား ၊ အသက်ရှင်ကျန် ရစ်ခဲ့တဲ့ လေဘေးသင့် ပြည်သူ တွေကို တောင် မသေမချင်း မျှင်းသတ်နေ သလိုပါပဲ ။
ပြည်တွင်း ၊ ပြည်ပက ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေနှင့် စေတနာ အလျှောက် အလှု အတန်း ပြုကြတဲ့ စေတနာ ရှင်တွေ ၊ အဖွဲ့ အစည်း တွေကို အဖျက် အမှောင့် လုပ်ဆောင် ကြမဲ့ မြေအောက် အဖွဲ့ အစည်းတွေ လို သဘောထား ပြီး ကန့်သတ်မှု တွေ အမျိုးမျိုး လုပ်ခဲ့တာပါ ။
တကယ် ဒုက္ခ ရောက်နေတဲ့ လူတွေဆီကို အကူအညီတွေ မရောက်နိုင်အောင် အတားအဆီးတွေ အမျိုးမျိုး လုပ်နေ တော့ ၊ဒုက္ခသည် တွေဟာ ကားလမ်းမတွေပေါ်ကို ထွက်လာရတာပါ ။ ဒီလိုလူ တွေဟာ သာမာန် အခြေ အနေမျိုးမှာ ဘယ်သူဆီကမှ လက်ဝါးဖြန်. တောင်းခံ မှာမဟုတ်ပါဘူး ။ စားဝတ်နေရေး အတွက် ဒုက္ခရောက် ကြလွန်းလို့ သာ မလွဲမရှောင်သာပဲ ယခုလို ဖြစ်လာကြတာပါ ။
ဒါကိုပဲ တိုင်းပြည် ရဲ. အသရေ ညိုနွမ်းလို တားမြစ် ရပါ သတဲ. ၊ သူတိုတွေ ရဲ့ လုပ်ရပ် ကရော တိုင်းပြည်ရဲ. ဂုဏ်သိက္ခာကို တောက် ပြောင်လာအောင်လုပ်ပေးနိုင် ရဲ.လားလို. ဆန်းစစ်ကြည်.ကြပါအုန်း ။ နိုင်ငံတကာ ကပေးတဲ. ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းတွေ ကို မှောင်ခိုရောင်စားတာ က အစ တိုင်းပြည် ရဲ.အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ အစည်း ထဲမှာ ပါနေတဲ့ ထိပ်တန်းဗိုလ်ချုပ်ကြီး တစ်ယောက်ရဲ့ သားသမီးက မူးယစ် ဆေးဝါး ဖြန်.ချီတာ အဆုံး
ဟာ တိုင်းပြည် အတွက် ဂုဏ်သိက္ခာ တက်တဲ့လုပ်ရပ်တွေ လားလို့ ပြန်မေး ကြည့်စရာ လိုပါလိမ့် မယ် ။
နာဂစ် မုန်တိုင်းကြောင့် အတိဒုက္ခ ရောက်ကြရတဲ့ အသက်ရှင်သန် ကျန်ရစ်သူ များ ကို ဖေးမကူညီ ခြင်းနဲ.အတူ
သေဆုံး ကွယ်လွန် သွားကြ တဲ. သူတွေ အတွက်ပါ ထည့်သွင်.စဉ်းစားပေးကြပါအုန်းလို့ ဒီစာစုလေးနဲ့ တိုက်တွန်း လိုက်ပါရစေ .။
Posted by phone myint at 8:49 PM No comments: Links to this post
စကားလုံးတွေ ပေါက်ကွဲထွက် ကုန်တဲ.ည
ပဉ္စလက် ဆန်ဆန် ကကြိုးနဲ.
ပျော်ဝင် သွားခဲ.တယ် .....။
အလင်းမြစ် ထဲ စီးဆင်း
ကိုယ့် လမင်းနဲ့ ကိုယ်
အချစ်သီချင်းတွေ ဆိုလို့ ......
နေမြင့် လို့ ရင့်တဲ့ အရူး
ကိုယ်နဖူး ကိုယ် စမ်းပြီး
ဒေါသထွက် ရတဲ့ ပုဏ္ဏားမိုက် လက်သစ်ပေါ့.....
ခေါ်သံတွေ မကြားချင်တော.ဘူး ......
မြောက်လေ နိုးပါ ၊ တောင်လေ လာပါ
ဂျိုးဖြူငှက်ရဲ. ခြေကျဉ်း ကို ချွတ်တော်မူပါ.....
စုံလုံးကန်းခဲ့သော ၊ နတ်ဘုရားများကြောင့်
ဆွံအ သွားခဲ့တယ် ......
ဟောဒီမှာ ငါရဲ့ ရုပ်ခန္ဓာ
ရွက်လွင့် ထွက်ခွာ နိုင်ဘို့
Posted by phone myint at 2:40 AM2comments: Links to this post
အခုတလော ဘလော.ရေးဘို.ကို စိတ်ထဲက ဘယ်လိုမှကို ဈာန်သွင်းလို. မရဘူးဖြစ်နေတယ် ။ နာဂစ်ကြောင်. ဖြစ်တဲ.စိတ်ဒါဏ်ရာတွေလဲ ပါတာပေါ. ၊ တနေ.တနေ. ကွန်ပျုတာရှေ.ထိုင် မြန်မာပြည် သတင်းတွေစောင်.ဖတ် နိုင်ငံတကာ က ခောတ်မှီ ကယ်ဆယ်ရေးတွေ အလုံးအရင်းနဲ့ဝင် လာလိမ်.မလားလို. မျှော်လင်.ချက် ကြီးကြီးနဲ.ပေါ့ ၊သေလိုက် ကြတဲ့ လူတွေဆိုတာလဲ သောက်သောက်လဲ ၊သတင်းစာ မျက်နှာတွေနဲ့ ကိုယ်တိုင်သွားရောက် ကူညီ လှုဒါန်းကြတဲ့ ဘလောဂါ များရဲ့ ဘလော.တွေပေါ်က မြင်နေ၊ တွေ.နေရတဲ. သတင်းဓါတ်ပုံ တွေကို ကြည်.ပြီး စိတ် အနာတွေက တဖြည်းဖြည်း များလာတယ် ။
ဘယ်လိုမှ စိတ်ချမ်းသာစရာမရှိဘူး။ စိတ်မထိန်းနိုင် တော. ကလော်တုပ် ချင်လာရော ။ ဒီကြားထဲ အမေရိကန်နဲ. ပြင်သစ်က ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းတွေ တင်လာတဲ. သဘောင်္တွေ ပြန်တော.မယ် လည်းဆိုရော စိတ်ဓါတ်က ပြုတ်ကျ သွားသလိုပဲ ။ (ဟိုဆရာ တွေပြောသလို ပြည်ပအားကိုး တာ မဟုတ်ရပေါင်ဗျာ ၊ သူတို.ဆီမှာ ပါလာတဲ ခောတ်မှီ နည်းပညာတွေနဲ. ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းတွေက ကျွန်တော်တို. ပြည်သူတွေ ထောင်ပေါင်းများ စွာရဲ. အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်တယ်လေ) ။
အလုပ်ထဲမှာလဲ အပြောင်းအရွှေ.တွေ လုပ်ရ ၊ ကိုယ်ပိုင် ပြသနာလေးတွေက လဲ နည်းနည်းရှိ နေတော. ဘလော့ရေးဘို.ဘက်ကို ခြေဦး မလှည့်ဖြစ်ဘူး ။ မုန်တိုင်းတိုက် ပြီးသွားထဲ က အိမ်ကို အဆက်အသွယ် လုပ်နေတာ မနေ.က မှ ဖုံး ပြောလုိ့ရတယ် ။ ဘယ်လောက်တောင် စိတ်ပူနေရသလဲ ဆိုတာသာ စဉ်းစားကြည်.ပေတော. အမေနဲ့ စကားပြော လိုက်ရတော. စိတ်ဖိစီး မှုတွေ နည်းနည်းလျော. သွားသလိုပဲ ။ မဟုတ်ရင် လူက မှုန်ကုပ်ကုပ်နဲ. ကြည်ကြည် သာသာ ကိုမရှိဘူး ၊ အလုပ်ထဲမှာ စိတ်နှစ်ထားလို.မရဘူး ။
အခုကျွန်တော် ကြုံတွေ.ခံစားနေရတာ က လမ်းဆုံ ၊လမ်းခွ တစ်ခုမှာ ရောက်နေသလိုပဲ ။ ကိုယ်ကိုယ် တိုင်လဲ ဘယ်လမ်းကို ရွေးချယ် ရမလဲဆိုတာ ပြတ်ပြတ်သားသား ဆုံးဖြတ်လို.မရသေးဘူး ။ သိပ် မကြာခင် အချိန်အတွင်းမှာ တော. ကျွန်တော်ရဲ. ကိုယ်ပိုင် ပြသနာ လေးတွေ ပြေလည် သွားလိမ်.မယ် ထင်ပါရဲ. ။
ဒီနှစ် ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဟာ ကျွန်တော် အတွက် အပြောင်းအလဲ နှင်. အနိမ်.အမြင်. အတက် အကျ တွေ တော်တော် များတဲ.နှစ်လို. မှတ်မှတ် ထင်ထင်ရှိမိတယ် ။ မကြာခင် အချိန် အတွင်းမှာ မလေးရှားရောက် ကျွန်တော် တို. မြန်မာတွေရဲ့ ဘဝ အတွေ.အကြုံဇတ် လမ်းအစုံစုံကို အခန်းဆက် သဘောမျိုး တင်ဆက် သွားပါမယ် ။ စောင်.မျှော် ဖတ်ရှုသွားကြ ပါလို့ အသိပေးရင်း နုတ်ဆက် လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ ။
Posted by phone myint at 2:45 AM2comments: Links to this post